Xabad joojintii Yemen iyo mucaaradka ee magaalada Xudayda oo burburay – Radio Daljir
Diseenbar 18, 2018 5:34 b 0
Heshiis xabad joojin ah oo la dhexdhigay ciidamada dowladda Yemen iyo kooxaha mucaaradka ee magaalada Xudaydah ayaa burburay, sida ay ku warameen saraakiisha dowladda taageersan.
Labada dhinac ee dagaalka uu u dhaxeeya ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah oo ay hayd inuu dhaqan gelo saqdii dhexe habeenimadii xalay.
Laakiin wararka laga helayo magaalada ayaa ku waramaya rasaas goos goos ah oo dowladda iyo kooxda Xuutiyiinta in laga maqlayay xalay oo dhan magaalada.
Sidoo kalle wararka ayaa sheegaya inuu jiray iska horimaadyo dowladda iyo Xuutiyiinta u dhaxeeyey, waxaana magaaladan oo ah magaalada afaraad ee ugu wayn Yemen aad ay ugu baahnayd in gargaar la gaarsiiyo dadka shacabka.
Wararka ayaa sheegaya mucaaradka inay duqeeyeen saldhigyo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin bariga magaalada Xudayda.
Labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa heshiis xabad joojin ah ku gaaray Khamiistii lasoo dhaafay, wada hadalkan oo QM ay taageerayso ayaa ka dhacay wadanka Sweden oo shir uu uga socday dowladda Yemen iyo dhaqdhaqaaq hubaysan ee kasoo jeeda.